Ishishini leeNethiwekhi zeNtlalo | Martech Zone
NgoMvulo, Meyi 11, 2009 NgoMgqibelo, uJanuwari 21, 2017 Douglas Karr
UDavid Silver, ongxowankulu osakhasayo nojolise kwezonxibelelwano, wabhala Isicwangciso soShishino lweNethiwekhi yoLuntu: Iindlela ezili-18 eziya kuthi zenze uButyebi obukhulu. Kudala ndiyifunda le ncwadi ndinomdla- kuba ndingumseki-kunye Incinci i-Indiana kunye nomnini we uthungelwano lwentlalo lwaMagqala oMkhosi woMkhosi.
Ezi nethiwekhi zineemodeli ezahlukeneyo zeshishini kunye neenjongo. UPat Coyle ungumnini kwaye usebenza encinci kwi-Indiana kwaye ujonge ukusebenzisa italente yangaphakathi yokwakha ku gqibela uthungelwano-ukudibanisa italente, ukunqanda idreyini yengqondo, ukuxhasa ubugcisa basekuhlaleni kunye nokuzonwabisa, kunye nokubonelela ngeziko lobuchule kunye nemibono. Kukho itoni enokubakho kunye nethuba lokuqhubeka nokwakha i-Indiana eNcinci- ke andisiboni isicwangciso seshishini esele sikhona (nangona ndizokwabelana nencwadi noPat).
Iivenkile zomkhosi waselwandle zisendleleni yokuba ngumbutho onoxanduva lokungenzi nzuzo. Injongo yeeVets zeMikhosi yamaNxweme kukuba yeyona nethiwekhi inkulu kwezentlalo Amanqwanqwa aseMelika oMkhosi wamanzi. Nakuphi na ukwenza imali kuthungelwano kuya kunikelwa kwizibonelelo zokuxhasa amagqala njengoko kuvotelwe ngamalungu awo. Ndijonge phambili ekubhaleni itsheki yokuqala kungekudala! Ngaphandle kwamathandabuzo ukuba uthungelwano luya kutshintsha ubomi… kwaye lizahlukanise nolunye uthungelwano lomkhosi olujonge ukwenza imali ngasemva kwabo bangamagqala abanikele kakhulu.
Isicwangciso soShishino lweNtanethi yezeNtlalontle senza umbono owahlukileyo kwindlela uthungelwano lwasentlalweni ekufuneka luyenze ngayo imali. Ngamafutshane, amandla amanani ngaphakathi kwenethiwekhi kufuneka asetyenziswe njenge Ukuthumela network ukuqhuba ishishini kwiinkampani. Khawufane ucinge ngebhanki, ivenkile, ifemu yegqwetha, njl igosa [faka imboni apha] yase-Indiana encinci. Kulapho uDavid Silver abona amandla.
Khange ndikwazi ukubeka izicwangciso ezili-18 ukuze zidwelise apha… ndicinga ukuba kuninzi kakhulu okunene. UDavid ubandakanya incwadi egqibeleleyo yokufumana kunye nokuthenga, ukukhula, ukwenza imali kunye nokuthengisa inethiwekhi yakho. Kuhlala kubonwa ukuba ngaba ukuhanjiswa kuyakuxabiswa kwi- $ 600 ukuya kwi- $ 1,000 kwilungu ngalinye elixhaswa nguDavid… ngaphezulu izigidi ze-Ning network kunye namakhulu ezigidi zabasebenzisi… yimali eninzi leyo ehleli phaya.
Ukuba ungusomashishini osebenza nzima onokuzinikezela ekusebenzeni imini nobusuku ukuze ukhule inethiwekhi yakho - kunokuba kunokuba yile ncwadi uyikhangelayo! Ndingathanda ukuba ndibone imizekelo yehlabathi yokwenyani yokuhamba nesicwangciso ngasinye encwadini. Kwinxalenye enkulu, kubonakala ngathi le ncwadi isisiqikelelo kunokuba isicwangciso seshishini.
Ngokubhekisele kuqikelelo lukaDavid, nangona… ndiyavuma! Amandla enethiwekhi yenethiwekhi akakho kwiimpawu, iqonga, amanani… kukuhambelana kwenethiwekhi ukubhekisa ukugcwala kunye nelizwi lokuthengisa ngomlomo kwiimpawu zangoku.
tags: isilivere kaDavideamaqhinga eendaba ezentlaloisicwangciso seshishini kwinethiwekhi yoluntuIsicwangciso seshishini kwinethiwekhi yoluntu